Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana: Miantehitra amin’ny hala-bato ny fitondrana
Fifidianana: Miantehitra amin’ny hala-bato ny fitondrana
Ady hevitra etsy sy eroa ny mahakasika ny tsy famoahan’ny fanjakana ny lalàmpifidianana izay hampiharina amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity.
Manao antso avo ny fiaraha-monim-pirenena amin’ny hisian’ny mangarahara amin’izany. Manaitra ny fitondram-panjakana amin’ny hamoahany tamin’ny taona 2017 iny ny lalàna sy ny vaovao tsara ho fantatra ny Malagasy mahakasika ity raharaha ity. Toa rano natondraka eny andamosin’ny gisa nefa izany satria tsy noraharahan’ny fanjakana akory. Io ilay avy amin’ny fitenenana hoe “fotsy rora miteny”. Izany nefa no andraikitra voalohan’ny fiaraha-monim-pirenena dia ny manaitra ny fanjakana sy milaza ny zavatra tsy mety amin’ny firenena iray mba hanitsian’ny fanjakana ny làlany ka hizoran’izany amin’ny làlana tokony ho izy sy mifanaraka fenitra ny tany tan-dalàna.
Tsy ny fikambanana ity ihany no mitaky izany fa isan’andro isan’andro dia tsy mitsahatra milaza ny antoko pôlitika maro fa tsy mazava intsony ny lalao eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao. Izay tian’ingahy Hery Rajaonarimampianina filohan’ny repoblika sy ny filohan’ny antoko HVM
(Hery vaovao ho an’i Madagasikara) ingahy Rivo Rakotovao sy ny mpiray petsapetsa aminy no itondrana ny firenena sy ampiharana ny lalàna.
Na dia natsangana koa aza ny CENI (Vaomieram-pirenena mahaleo tena momba ny fifidianana) dia resabe fotsiny no misy fa tsy hita izay tena andraikiny fa miankina tanteraka amin’ingahy Hery Rjaonarimampianina sy ny HVM ary ny governemanta ny asa ataony. Tsy afaka manapa-kevitra fa angady tsy mahatapak’ahitra. Vokany dia nanao fanambarana tamin’ny herinandro lasa iny fa tsy azo ny isa 10 tapitrisa izay notratrarina amin’ny isan’ny mpifidy. Mbola hisy koa ny fangatahana fivoriana amin’ny mpanao pôlitika nanomboka omaly ary mbola hitohy ao anatin’ny andro roa izany.
Rehefa tsy mazava sy tsy mahafeno ny fepetra takiana amin’ny fanatanterahana ny fifidianana izay hatao ao anatin’ny volana vitsy sisa ity isika Malagasy dia mazava fa tsy maintsy ny halatra no hanjaka. Na ny andrim-panjakana natao hanatanteraka izany aza tsy matoky tena intsony. Ny vahoaka izay hifidy dia mahatsapa fa resaka hala-bato no hanjaka amin’io fifidianana ho avy io.
10 volana sisa dia tsy maintsy mifidy ny Malagasy raha ny Lalàmpanorenana no asian-teny. Ny lalàna Malagasy dia mandrara ny fanaovana fifidianana amin’ny andro fahavaratra. Midika izany fa ny volana novambra 2018 no tokony hisy ny fihodinana voalohany. Izany nefa dia tsy maintsy misy lalàna manokana manendry izany fa tsy vitan’ny filazana ao anaty Lalàmpanorenana ihany. Aiza ary io lalàna io amin’izao fotoana izao. Andro inona ary volana inona no tena hanaovana ny fifidianana? Tsy misy mahalala izany raha tsy ingahy Hery Rajaonari-
mampianina sy i Rivo Rakotovao ihany. Tsy mahagaga raha manahy mafy ny vahoaka fa hangalatra indray ny fanjakana mitondra ankehitriny satria ataony tsy mazava ny raharaha dia izy ihany no mikotrika izany ao.
Aiza koa ny tetiandro amin’ny fanatanterahana izany fifidianana izany (Calendrier electoral) izay tokony efa ho fantatra iray taona mialohan’ny fifidianana? Moa ve tsy hifono halatra koa izany?
Firy marina no isan’ny mpifidy eto Madagasikara ary inona no nataon’ny fanjakana mba hahazoana ny tarehimarika manakaiky ny isan’ny mponina marina ka hahazoan’ny Malagasy mifidy ara-dalàna? Vitan’ny filazana amin’ny haino aman-jery sy ny peta-drindrina ihany izany ka izay tonga dia tonga. Tsy misy fidinana sy fanadihadiana ifotony akory ary tsy nametraka laminasa matipaika amin’izany ny fitondrana.
Tsy mazava hatramin’izao ny isan’ny birao fandatsaham-bato marina eto Madagasikara. Misy aza ny antsoana hoe “birao fandatsaham-bato matoatoa” na “fictif”, toa ny nitranga teo aloha nefa tsy misy fandraisana andraikitra ataon’ny fanjakana amin’izany amin’izao fotoana izao.
Ireo rehetra ireo no porofo azo entina fa hanjaka ny hala-bato ary ratsy fanomanana ny fifidianana ity ka hanome vahana ny halatra hataon’ny mpitondra fanjakana. Misy aza no milaza fa tena safidin’ny fanjakana mihitsy izao fanomanana atao tsizarizary izao.
Ny mpitondra fanjakana no lazaina fa hangala-bato satria izy ireo no tompon’ny fahefana sy ny fanalahidy rehetra amin’izany, ka afaka mampiasa izany fahefana izany amin’ny fomba rehetra tiany hanaovany azy toa izao mitranga ankehitriny izao.
Tsara ihany ny ilazana izany dia mbola azo atao ny mitsabo satria ny saim-bahoaka dia efa manahy mafy izany. Izany koa no nahatonga ny krizy nifanefisesy teto amin’ny firenena nanomboka ny taona 2001 iny. Tsara ny misoroka izany dieny mbola mialoha ka hanitsian’ny fanjakana ny diany mba hisian’ny fitonian’ny Malagasy rehetra alohan’ny fifidianana izao.